DTG → Daabacaadda Tooska ah ee Dharka waa hab casri ah oo toos ah
Daabacaadda DTG - waa qaab casri ah oo toos loogu qurxiyo
Daabacaadda DTG ama "Tooska To Dharka" waa habka casriga ah qurxinta tooska ah ee dharka iyo dharka. Farsamada 'DTG' waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dalbatid wax sawiro ah dharka cudbiga ama cudbiga oo leh shaybaarka elastane / viscose. Sawirada waxaa lagu abuuray daabacaad gaar ah. Qalabka aan ku hayno baarkinka mashiinka waa nuuca ugu dambeeya ee daabacaha Walaal GTXpro Bulktaas oo, mahadsanid madaxyada warshadaha, ay si deg deg ah ugu daabacdo alaabada. Daabacaadda iyadoo la adeegsanayo farsamada DTG dhalmo midab kaamil ah oo leh kala-guur midab leh. Daabacaadda ayaa suurtagal ah iyada oo aan loo baahnayn in mashruuc la diyaariyo kaliya hal gabal.
Daabacaadda sawir shaati ah adoo adeegsanaya habka DTG
U adkaysiga daabacaadda DTG waxay kuxirantahay dhowr waxyaalood. Ugu horreyntii, moodeelka iyo halbeegyadiisa - qalabka cusub, ayaa ka sii badan tayo fiican iyo wax soo saarka. Waxyaabaha kale ee saameynaya adkeysiga waa noocyada rinjiga la isticmaalay, dharka lagu daabacay daabacaadda iyo xirfadaha shaqaalaha.
Walaalkeen GTXpro Bulk printer ayaa suurto gal ka dhigaya ku daabac cabir ahaan ugu badnaan 40,6 cm x 53,3 cm. Thanks to dhimista kharashyada iyo waqtiga dayactirka, waxaa suurtagal ah in loo diyaariyo mashiinka daabacaadda si dhakhso leh loona yareeyo tirada carqaladeynta shaqada. Dhererka madaxa ee ugu fiicani ma aha oo kaliya inuu joojiyo habka daabacaadda marka quudiyaha uu si khatar ah ugu dhow yahay madaxa, laakiin sidoo kale wuxuu xasaasi u yahay masaafo aad u ballaaran oo u dhexeysa madaxa iyo quudiyaha, taas oo had iyo jeer dammaanad qaadda tayada daabacaadda sare Cusub, madax khad cad oo hagaagsan oo leh tirada nozzles oo kordhay waxay bixisaa 10% qaab daabacan oo dhakhso ah. Tani, markeeda, waxay u tarjumaysaa waqtiyo gaabin gaaban oo macaamiisha ah.
Daabacaha tooska ah ee DTG
Fursadaha ballaaran ee daabacaadda DTG
Mashiinka cusub ee loo yaqaan 'DTXpro Bulk printer' waa nooc jilicsan oo qaab aad u tiro badan leh. Waxay bixisaa astaamaha wax soo saarka ballaaran, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon fulinta nidaamka ballaaran.
DUKAANKA IYO HAY'ADAHA: GTXpro waa xalka ugu fiican ee lagu diyaarin karo noocyada dukaamada, wakaaladaha xayeysiinta, hay'adaha, naadiyada iyo goobaha shaqada. Teknolojiyada DTG waa mid jilicsan oo is haysta. Waad ku mahadsan tahay, waxaad ku ballaarin kartaa bakhaarkaaga alaabooyin gaar ah sida Funaanado qof kasta oo magaciisa leh, cinwaan shaqo, bacaha xayeysiintaiyo xitaa kabo leh farshaxanimadaada. Shakhsiyeyn waxay door bidaysaa aqoonsiga isticmaalaha sumadda, taas oo saamayn ku leh muuqaalka wanaagsan iyo kalsoonida oo kordha.
DTG ku daabac funaanadaha kooxda tabaruca ah
FIKRADA KU SAABSAN KOOXDA IYO HADIYADAHA QOFKA LEH: Kirismaska, Ciida, jubiliilada, guulaha xirfadeed, Maalinta Hooyada ama Maalinta Caruurta waa munaasabadaha ugu caansan ee loo diyaariyo hadiyado marmar. Qofka shaqsiga ah, shakhsi ahaan mararka qaarkood - ayaa si fiican u muuqda aragtida iyo xaqiiqda boos xoog leh. Hadiyadaha shirkadda ee shaqaalaha ama hadiyado jubilee sida abaalmarinta tartamada fursad weyn oo ku diirinta sawirka. Dhanka kale, hadiyadaha, gaar ahaan kuwa wax ku oolka ah, sida shukumaanada sanad guurada 20aad ee shirkada jiritaankeeda ama calaamadda abaalmarinta ay heshay shirkadda, waxay noqon doontaa qalab aad u wanaagsan loogu talagalay lamaanayaasha iyo macaamiisha mustaqbalka waayo, xooji mowqifka shirkada tartanka.
Taa baddalkeeda, suurtagalnimada daabacaadda oo ka timid hal xabbad ayaa furaysa ikhtiyaarka lagu diyaariyo hadiyad asal ah oo loogu talagalay qof khaas ah maalin gaar ah. Xiriirka shaqsiyeed ee lagu sharfay hadiyad lagu abuuray kaqeybgalka hal abuurnimadiisa, iyo tayo sare leh, waxay reebi doontaa xusuusno wanaagsan sanado badan. GTXpro waxay kuu ogolaaneysaa inaad ahaato mid jilicsan oo wax soo saar ah, waxay na siineysaa fursad aan si dhaqso leh iyo dhaqaale ahaanba uga jawaabno isbeddelada amarada.
Daabacaadda DTG uma baahna diyaarin mashruuc, taas oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ugu waaweyn (sida ay tahay kiiska daabacaadda shaashadda ama daabacaadda kumbuyuutarka). Dilkiisa si toos ah ayaa looga heli karaa faylka macmiilka, kaas oo ay tahay in loo waafajiyo si waafaqsan. Waa suurtagal in laga daabaco hal gabal, oo kuu oggolaanaya inaad sameyso daabacaadda imtixaanka ka hor intaan la samayn tiro badan. Sidoo kale daabac sawir waa suurtagal, laakiin waa muhiim inuu ku jiro xalka ugu sarreeya ee suurtogalka ah.
JOOGTADA: Waa faa iido weyn cimri dhererhaddii lagu sameeyo qalab xirfadeed. Isticmaalka hagaajinta cusub ee hawlgalka dhaqaale ee badan ayaa oggolaanaya kharash yar oo daabicis ah. Maaddadu waa inay ahaataa cudbi ama isku-dhafka viscose, ama elastane, laakiin waa muhiim in uusan aad u kala bixin.
Raacitaanka talooyinka soo-saaraha ayaa noo oggolaan doona inaan ku raaxeysano saameynta mashruuceena muddo dheer. Waad ku mahadsan tahay caawinta kooxdeena, waxaad hagaajin kartaa habka qurxinta, waxaadna dooran kartaa badeecooyinka ugu habboon kuweenna dukaan.
Daabacaadda DTGdaabacaadda dharkaDTG bacahaDTG raqiis ahqalab daabacanT-shaati oo daabacandaabacaad toos ahdaabacaadda sawirada iyo qoraalladadaabacaadda sumadda shirkaddaku daabac dhididkadaabacaadda funaanadahadaabacaadda funaanadaha munaasabaddaku daabac dharkadaabacaadda dharka qiimo jabandaabacaadda funaanadahadaabacaadda bacahadaabacaadda oo ka kooban hal gabaldaabacaadda imtixaankadaabacaadda sawirkaabaalmarinta tartankadhar daabacan oo loogu talagalay shaqaalahahadiyad ayeeyohadiyad awoowehadiyad haweenhadiyad hooyadeedhadiyad ninhadiyad saaxiibhadiyad saaxiibhadiyad walaasheedhadiyad aabehadiyadda kirismaskahadiyad guuradiihadiyadda dhalashadahadiyadaha shaqaalahahadiyado shaqsihadiyadaha ciidahahadiyado shaqsiyeeddaabacaad raqiis ahdaabacaad jabandaabacaadda calaamadda joogtada ahku daabac funaanadahaku daabac dharkaaga